Permalink Reply by Kyi Wai Thaw on June 2, 2011 at 1:31
လူတွေ စာဖတ်ကြတာ အကြောင်း အမျိုးမျိုးရှိတယ်လေ။ ပျင်းလို့ဖတ်တာ၊ လိုအပ်လို့ဖတ်တာ၊ စိတ်ဝင်စားလို့ဖတ်တာတွေလိုမျိုးပေါ့။ တစ်နေကုန် အလုတ်များနေတဲ့ လူတွေ အတွက်ကတော့ စာဖတ်ဖို့ အချိန်ဘယ်ရှိပါ့မလဲနော်။ တစ်နေကုန် ပင်ပန်းလာတဲ့ လူတွေဟာ ဒီလိုခေတ်မျိုးမှာ ဘယ်သူက စာဖတ်နေတော့မှာလည်း။ အင်တာတိမ်းမက် မီဒီယာတွေက တစ်နေ့တခြား များလာပြီလေ။ တစ်နေ့တခြား ကမ္ဘာကြီးက ပိုပြီး ကြပ်တည်းလာလေလေ လူတွေက ပိုပြီး ကြိုးစား ပိုက်ဆံရှာရလေလေ ဖြစ်နေတော့ ဒီနေ့ခေတ်လူတွေရဲ့ စိတ်ဖိအား ပေးခံရတာတွေက ပိုကြီးလာပြီလေ။ နောက်ပြီး စာမဖတ်ဖြစ်တဲ့ လူအများစုက အောက်ခြေ လူတန်းစားတွေ မဟုတ်လား။ သူတို့ခမျာမှာလေ တစ်နေကုန်တစ်နေခမ်း လူတပါး ခိုင်းတာတွေ လုတ်ခဲ့ရလို့ ပင်ပန်းရတဲ့ကြားမှာလေ ဟိုဟာလုတ်ပါလား၊ ဒီဟာ လုတ်ပါလားနဲ့ ဆရာကြီးလုတ်လုတ်နေတတ်တဲ့ မက်ဂဇင်းတွေ စာအုပ်တွေ ဖတ်မဲ့ အစား အပင်ပန်းပြေရာပြေကြောင်းလေးပဲ ရှာဖွေတော့မှာပေါ့လေ။ စာမဖတ်သူ ပပျောက်ရေးတဲ့လား။ စာအုပ်တစ်အုပ်တန်ဖိုး မပြောနဲ့နော် အငှားခကတောင် ဒီလောက်ဈေးကြီးနေတာလေ။ အားကိုးရလောက်တဲ့ စာကြည့်တိုက်တွေလည်း လိုဦးမှာပေါ့နော်။ ကျွန်တော်ပြောတာကလေ ကျွန်တော်တို့လို အခြေခံလူတန်းစားတွေရဲ့ ခံစားချက်ကလေးတွေပါ။ အမှား ပါရင်လည်း တောင်းပန်ပါတယ်နော်။
Permalink Reply by Thiha Bo Bo on June 3, 2011 at 14:04
စာအုပ်ကောင်းတွေတော့ ဖတ်ချင်ပါတယ်... မဝယ်နိုင်တာဆိုးတယ်... အလကားပေးဖတ်ရင်တောင် အချိန်လိုသေးတယ်... မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ
Permalink Reply by blackknight on June 25, 2011 at 21:38
အစ်ကိုကတော့ သနားစရာဖြစ်နေပြီထင်တယ်။ ကျွန်တော့်လိုပေါ့။
မ၀ယ်နိုင်တာပဲဖြစ်မယ်ဗျ။ အလကားရတောင် ဖတ်ချိန်မရှိတာတော့ မဟုတ်လောက်ဘူး။
အရမ်းအလုပ်များတဲ့ ပြည်တွင်းပြည်ပက ပညာရှင်တွေ၊ ပါမောက္ခတွေတောင် တစ်အုပ်
ပြီးတစ်အုပ်ရေးနေကြတာကို။ ကျွန်တော်တော့ စာအုပ်ကောင်းတွေမဖထ်နိုင်လောက်အောင်မအားပေမယ့်
Permalink Reply by Peaceangel on June 2, 2011 at 5:02
အခုလို့ကော့မက်ပေးထားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...အကိုကလည်း အကို့အမြင်.အကို့ဝေဖန်ချက်အတိုင်းပြောဆိုထားသလို အကိုပြောတာလည်းမှန်သင့်သလောက်မှန်တယ်လို့ညီမ လက်ခံပါတယ်...
ညီမဒီပို့စ်ကို တင်လိုက်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်က စာပေချစ်တဲ့လူတန်းစားနဲ့ ဒီအထက်ပါအကြောင်းအရာကိုဖတ်မိပြီး စာဖတ်ခြင်းရဲ့အခန်းကဏ္ဏဟာအရေးကြီးပါလားဆိုပြီး စာအုပ် စာပေတန်ဖိုးကို တန်ဖိုးထားတတ်လာမဲ့သူတွေကိုရည်ရွယ်ထားပါတယ်..မူလဒီစာကိုရေးတဲ့သူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်း ဒီလိုဘဲဖြစ်မယ်လို့ညီမထင်ပါတယ်...
အကိုပြောထားသလိုပါဘဲ..အခုခေတ်မှာနည်းပညာတွေတိုးတက်လာတယ်ဆိုတော့ စာအုပ်လို့ပြောပေမဲ့ စာဖတ်ဖြစ်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်လေ..အင်တာနက်မှာဖတ်ဖတ်... စာအုပ် စာစောင်တွေကိုဘဲဖတ်ဖတ်..ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျုတာထဲမှာဘဲဖတ်ဖတ် ဖတ်ဖြစ်ဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်...ဒါလေးကိုတော့ ကိုယ့်အသိစိတ်နဲ့ကိုယ်ဖြည့်တွေးလိုက်ရင် စာရေးသူရဲ့စေတနာကို အကိုနားလည်မှာပါ...
ပြီးတော့အကိုပြောသလိုပါဘဲ..လူတွေဟာတနေ့တနေ့ ရုန်းကန်နေရတယ်..စိတ်ဖိအားပေး..စိတ်ဖိစီးမူ့တွေကြောင့် စာဖတ်ချိန်မရ..စာမဖတ်ချင်ကြတော့ပါဘူးလို့ပြောထားတယ်... ညီမ မြင်တာကတော့လေ.. စာကိုတကယ်ဖတ်ချင်ရင် အချိန်နဲ့နေရာမရွေးပါဘူး... ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်လည်း..ကားစောင့်ရင်း..ကားပေါ်မှာ (ထိုင်စရာနေရာရခဲ့ရင်ပေါ့လေ)... အလုပ် break time ယူတဲ့အချိန်မှာ... ကိုယ်ပိုင်အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေ...့ ဈေးရောင်းတဲ့သူတွေ..တချို့လူကြီး..လူငယ်တွေ..ဆေးလိပ်သောက်ဖို့အတွက်..ကွမ်းစားဖို့အတွက်..ဂိမ်းဆိုင်မှာဂိမ်းဆော့ဖို့အတွက် သုံးမဲ့အစား မိမိဘဝအတွက်အကျိုးရှိမဲ့စာကောင်းပေကောင်းတွေကို ဝယ်ဖတ်လိုက်ရင် သူတို့ဘဝအတွက် အကျိုးရှိလာမှာဘဲ...အရင်ဆုံးသူ့ဘဝတိုးတက်လာမယ်..ပြီးနောက်မိသားစု တိုင်းပြည်တိုးတက်လာမယ်....
မရှိလို့မဖတ်..မဖတ်တော့မသိ... ပျင်းလို့မဖတ်..မဖတ်တော့မသိ...ဒီလိုလူတွေများလာလို့ အသိဥာဏ်တွေဆုတ်ယုတ်လာပြီး အညွန့်တုန်း..အသိဥာ့ဏ်တုန်းတဲ့သူများလာရင် ဘယ်သူတွေထိခိုက်မလဲနော်အကို...
သူများနိုင်ငံမှာ တကယ်အားကျဖို့ကောင်းပါတယ်..သူတို့လောက်စိတ်ဖိစီးမူ့များပြီး အလုပ်များတဲ့သူ ဘယ်သူများရှိမလဲနော်...ကလေးလေးကမှ အစစာအုပ်လေးတွေကို အချိန်ရရင်ရသလိုဖတ်တတ်ကြတာတွေ့ရတယ်..ဒါတွေဟာ ညီမတို့လူမျိုး..ညီမတို့နိုင်ငံက တချို့သောလူတွေနဲ့ကွာဟချက်ပါဘဲ...
အကိုပြောတဲ့အထဲမှာ အားကိုးရတဲ့စာကြည့်တိုက်တွေလိုတယ်ဆိုတာကို လည်းညီမသဘောတူပါတယ်...စာပေချစ်တဲ့သူတွေ..တတ်နိုင်တဲ့သူတွေက စာဖတ်တဲ့အကျင့်ကောင်းလေးတွေရလာဖို့..မတတ်နိုင်လို့စာမဖတ်ရတဲ့သူတွေအတွက် တပိုင်တနိုင်စာကြည့်တိုက်လေးလုပ်ပေးတာတို့ ဒီလိုလေးတွေ ဖြစ်လာနိုင်အောင် ဝိုင်းဝန်းအားဖြည့်ပေးနိုင်ပါစေလို့မျှောင်လင့်ပါတယ်...
စာဖတ်ပြီး အသိပညာဗဟုသုတတွေရလို့ စာဖတ်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုခံစားစေချင်တာကိုရည်ရွယ်ပြီး သတိပေးတိုက်တွန်းတဲ့အနေနဲ့ဒီပို့စ်ကိုပြန်လည်ဝေမျှလိုက်တာပါ..အမှားများပါခဲ့ရင်လည်း ခွင့်လွတ်သည်းခံပေးပါလို့တောင်းဆိုပါတယ်...ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်...
Permalink Reply by Kyi Wai Thaw on June 2, 2011 at 13:47
ကျေးဇူး အများကြီး တင်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ မဖတ်လို့ မသိ၊ မသိလို့ မဖတ်နဲ့ ဒီလိုပဲ သံသယာလည်နေကြတာကို ရပ်ပစ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ကျွန်တော် ထင်တယ်လေ လူတွေစာဖတ်စေချင်ရင် စာရေးတဲ့လူတွေကလည်း ဖတ်လို့ ကောင်းတဲ့ စာတွေကို ရေးကြရမှာပေါ့။ စာဖတ်သူတွေဘက်ကလည်း စာပေကို စိတ်ဝင်စားမှူတွေ လျော့နည်း လာခဲ့ကြရတာဟာ ခေတ်နဲ့လည်း ဆိုင်နေသလို စာရေးသူတွေနဲ့လည်း ဆိုင်မှာပေါ့နော်။ စာပေနဲ့ လူထုနဲ့၊ စာပေနဲ့ လက်တွေ့ ဘ၀နဲ့ အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိပဲ လွပ်လတ်မှူ ရှိနေသင့်ပါတယ်။ ရနေ့ခေတ်တွေမှာကလေ စာပေနဲ့ လူထုနဲ့ တဖြည်းဖြည်း ဝေးကွာလာနေတာကို တွေ့ကြရမှာပါ။
အထူသဖြင့် ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာလေ အင်တာနက်ကဟာတွေကူးချ၊ ဂါးဒီယန်းက ဟာတွေကူးချ၊ နက်ဂျီအိုကဟာတွေကူးချ၊ နိုင်ငံခြား မက်ဂဇင်း တွေကဟာတွေ ကူးချနဲ့ လက်တွေ့ မြန်မာတွေ နေ့စဉ် ကြုံတွေ့ နေကြရတဲ့ ဘ၀တွေ နဲ့ အဖြည်းဖြည်း ဝေးလာကြပြန်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး အပျော်ဖတ်စာပေတွေ ကတောင် နိုင်ငံခြား(အထူသဖြင့် အနောက်နိုင်ငံတွေက) ကူးခြ နေကြပြန်တော့ စာဖတ်သူတွေ ဘက်လည်း ပြန်ကြည့်ဦးလေ၊ လူထုနဲ့ မဆိုင်တဲ့ စာပေကို လူထုက ဘယ်လက်ခံ ချင်ကြတော့မလဲနော့်။
လူဆိုတာကလည်းလေ ခြုံငုံတွေးခေါ်တတ်ကြတဲ့ သဘောရှိတယ်လေ။ ဒီသဘောပဲလေ အရည်အခြင်း မပြည့်မှီတဲ့ စာပေတွေ များလာလေလေ လူတွေရဲ့ အတွေးတွေမှာ စာပေတွေဟာ အရည်အခြင်း ပြည့်မှီခြင်း နည်းလာလေလေ လို့ ကောက်ချက်ချကြမှာပဲလေ။ ကောင်းတဲ့ စာပေတွေ စာပေပညာရှင်ကြီးတွေကိုလည်း ယုံကြည်မှူတွေ နည်းကုန်ကြတော့တာပေါ့။
ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကလေ စာပေစီစစ်ရေးတွေကိုလည်း အမျိုးသားရေး အဆင့်အနေနဲ့ တင်းကြပ်စီစစ် သင့်တယ်လို့ ဆိုလိုခြင်တာပါ။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုး တွေ စာပေနဲ့ ပို၍ပို၍ နည်းစပ်လာဖို့ကတော့ ကျွန်တော်တို့ နည်းမျိုးစုံ လိုအပ်ဦးမှာပါ။ ဘယ်သူဘယ်လိုလုတ်လေ၊ ဟိုသူကဟိုလို လုပ်ရမှာပေါ့လို့ အခြင်းခြင်း ပြောနေမဲ့အစားလေ လူတိုင်းလူတိုင်း ကိုယ့်တာဝန် ကိုယ်ကျေနေကြရင်တော့ လောကကြီးဟာ ဒိထက်ပိုပြီး ကျေနပ်စရာလေး ဖြစ်နေတော့မှာပေါ့လေ။
Permalink Reply by Peaceangel on June 3, 2011 at 3:09
ကိုကြည်ဝေသော် အထက်မှာဆွေးနွေးထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်း ညီမလက်ခံပါတယ်....အကိုထောက်ပြထားတဲ့အချက်တွေက လက်ရှိမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အနေအထားတွေလေ..
ဒီစာဖတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကို ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင် အကောင်းဘက်ကနေဖြစ်ဖြစ် အဆိုးဘက်ကနေဖြစ်ဖြစ် ဆွေးနွေးရမဲ့အကြောင်းအရာတွေက များပြားလာမှာပါ.....
အကိုပြောသလိုပါဘဲစာပေရေးသားကြရာမှာ ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန် ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်ဖြင့်ရေးနိုင်တဲ့သူတွေတိုးပွားလာရင် အတိုင်းအထက်အလွန်ပေါ့.... ဒါပေမဲ့အကို... ကိုယ်ပိုင်နည်းလမ်းဖြင့်ရေးနိုင်တာက အကောင်းဆုံးဖြစ်သလို တချို့သောသူများကလည်း စာဖတ်သူတွေကောင်းကျိုးကိုရှေးရှူုပြီးကူးယူဖော်ပြတာကိုလည်း ဝမ်းမြောက်သင့်ပါတယ်... နိုင်ငံအသီးသီးမှစာပေပညာရှင်..ညီမတို့နိုင်ငံက စာပေပညာရှင်တွေလောက်မရေးတတ်တဲ့သူတွေရှိပေမဲ့ အခုလို ကူးယူဖော်ပြတာဘဲဖြစ်ဖြစ်..ကိုးကားရေးသားတာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဒါဟာလည်း သူတို့တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က စာပေကိုအားဖြည့်ထားပေးထားတာပါဘဲ...
လောကမှာက အကောင်းနဲ့အဆိုးဟာ ဒွန်တွဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် မကောင်းတဲ့စာပေတွေရှိသလို အကျိုးပြုတဲ့စာပေတွေလည်းရှိတာပါဘဲ.. ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့စာကောင်းပေကောင်းတွေကိုရွေးဖတ်ကြရမှာပေါ့နော်..စာပေမကောင်းတာကိုဖတ်ဖြစ်ရင်တောင် အဲဒီမကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာကိုတောင်ပညာယူတတ်မယ်ဆို
Permalink Reply by ngal lay on June 3, 2011 at 19:10
အမရဲ့ ဆွေးနွေးချက်လေးကို ညီမလည်းလက်ခံပါတယ်....စာအုပ်ကို ဖတ်နိုင်ချင်းမဖတ်နိုင်ချင်းဆိုတာထက်
ဖတ်မိတဲ့ စာအုပ်ပေါ်ကကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းကို...ပညာယူတတ်ဖို့ကစာဖတ်မိခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးပါပဲရှင်
Permalink Reply by hnin pwint phyu on June 4, 2011 at 15:48
i read many books for my knowledge and my pleasure .
At the present, i can't read it everyday coz of my work.
whatever, i will participate your plan .
Permalink Reply by Ko Myo Zin on June 2, 2011 at 10:08
Really thanks for ur precious post , and i just want to advise ....
Start from ur closet one for this program "စာမဖတ်သူ ပပျောက်ရေးပါ။ ဒါသိပ်အရေးကြီးနေပါပြီ။"
Permalink Reply by Peaceangel on June 3, 2011 at 3:52
Thank you so much for your comments, Zin! I had been trying according to your advise to my closet one ...like family members ..then friends...then....so on to all our nation!!! Let's try together with all our best!! Thank you again!!
Permalink Reply by Kyi Wai Thaw on June 2, 2011 at 14:06
Read more: သန်းခြောက်ဆယ်ထဲက စာမဖတ်သူတို့ အကြောင်း - Myanmar Network http://www.myanmar-network.net/forum/topics/3423487:Topic:207019#ix...
Peace angel ရေးထားတာပါ။ သူများနိုင်ငံတွေဆိုတာကလေ ဘယ်နိုင်ငံတွေကို ပြောတာလဲနော်။ ကျွန်တော်က အောက်ခြေလူတန်းစားက လူတစ်ဦးပါ။ ဒါကြောင့်လည်း ဘယ်နိုင်ငံရောက်ရောက် အောက်ခြေလူတန်းစား တွေရဲ့ ဘ၀ကို နားလည်အောင် ကျွန်တော် လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ လူတကာတွေ မသိကြတဲ့ သတိ မထား ထည့်မတွက်ကြတဲ့ လူများစု အောက်ခြေလူတန်းစားတွေ အကြောင်းလေ။ တစ်နေ့ကို သုံးလေးနာရီလောက်ပဲ အိပ်ပြီး အလုတ်လုတ်နေကြရတဲ့ သူတွေ၊ တစ်နေ့လုံး ထပ်ခါတလည်းလည်း ဒီလိုအလုပ်ကိုပဲ တစ်သက်လုံး ဒီလိုပဲ စခန်း ဆက်ကြရတော့မယ့် အတိုင်းကို အလုပ်လုပ် နေကြရတဲ့ သူတွေလေ။ တရုတ်ပြည်မှာလား၊ ကိုရီးယားမှာလား၊ နိုင်ဂျီးရီးယားမှာလား၊ အော်စတြေးလျမှာလား၊ တောင်အာဖရိကမှာလား နိုင်ငံပဲကွဲသွားတာပါ ဘ၀တွေကတော့ အတူတူပဲလေ။
စာဖတ်ဖို့ အချိန်ကြတဲ့လူနည်းစုလူတန်းစားကတော့ အချိန်ကြရင် ရလို ကလေးလေးကအစ စာဖတ်ကြမှာပေါ့နော်။ စာဖတ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့သူတွေကတော့ အချိန်လုပြီးတော့ စာဖတ်ကြမှာပေါ့။ုအကောင်းကွက်ကလေးတွေကတော့ အတုယူစရာလေးတွေပေါ့။
လူတိုင်း စာဖတ်ဖို့ လိုတာပေါ့။ စာပေဆိုတာ ပညာနဲ့ လူသားရဲ့ကြားက ပေါင်းကူး တံတားလေးတစ်ခုပဲလေ။ စာဖတ်တဲ့ လူတွေက စာမဖတ်တဲ့ လူတွေထက်ကို ပိုပြီး ပညာတတ်ကြမှာ သဘာဝပဲလေ။
စာဖတ်ဖို့ တိုက်တွန်းပေးကြတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တောင်းပန်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အောက်ခြေလူတန်းစားတွေကို တခြားနိုင်ငံကလူတွေနဲ့ နှိုင်းနှိုင်းပြီးတော့ အပြစ်တင် ပုတ်ခတ် တာတွေ မလုပ်ကြဖို့ပါ။ မြေနိမ့်ရာ လှံစိုက်တယ် ဆိုတာ သဘာဝပဲ ဆိုပေမဲ့လေ ချို့တဲ့ မှူတွေကြောင့်အားငယ် နေကြသူတွေ(အပြင်ပန်းတော့ ဘယ်တွေ့မလဲနော့) ကိုဝိုင်းဝိုင်းပြီး ဆရာလုပ်နေကြ၊ အပြစ်ပြော နေကြတာလည်း များနေပါပြီ။ ဒါ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တတွေလေ ဟိုနိုင်ငံကဟိုလို ဒီနိုင်ငံက ဒီလိုဆိုပြီး နှိုင်းယှဉ် ပြောဆိုနေကြမဲ့အစား လက်တွေ့ လုပ်အားနဲ့ပဲ ကြိုးစား ဆောင်ရွက်ကြပါဆို့နော်လို့။
Permalink Reply by Nanda Aung on June 2, 2011 at 22:56
I did really appreciate what did u mention i just wanna discuss instead of my sis .For me main things depend on someone that how much he love the books if u really love the book u will find the way that u can read . We r also normal class people like u, there is one more thing when i was working the other country i try to observe the habit of people and then i found it our people needed to be good teamwork . As my opinion when i read the history of our country i found that our country people can't work together coz we tried to establish some of party but it would never long last they have been broken different reason no matter lower class or higher class or educated or not educated that is mean we r lack of that ability . That is without doubt our people r intelligent but fail to learn good habit form the other people habit.Coz teamwork,group that is most important ,i have been read one book in that book author is saying like that " One grain of sand is nothing but if u collect trillion of sand that kind of amount can make gravity and can happen the tide.U know why the Israel can stand among his enemy there is only reason they team is so strong if u read about the history of Israel u become to know.Some kind of knowledge we can get form the books coz we can't go around world so we can estimate what it is happening the other side of the world how they r thinking , what is their belief that is presented by some authors.But ur right that our country need so many of library but u know what our people did even though u can read the books free of charge they don't wanna to use it nicely some try to thief and some r boring to return the book.The thing is we need to change our habit too.Anyway y r welcome . We can discuss what u r seeing what r u thinking .